Video: Dowladda Masar Oo Ogolaatay in Magaalada Qudus Ay Noqoto Caasimadda Yahuudda. – Bogga Calamada.com
January 9, 2018 5:18 am Views: 193
Soddon maalmood ayaa laga joogaa markii Donald trump hogaamiyaha dowladda Mareykanka uu ku dhawaaqay in magaalada Qudus uu u aqoonsaday Caasimadda Yahuudda sa arrinkaas oo caro daran ku abuuray malaayiin qof muslimiim ah oo caalamka daafihiisa ku dhaqan.
Warbixin cusub oo lahelay ayaa banaanka soo dhigaysa in dowladda masar oo qeyb ka aheyd dowladihii saxiixay heshiiskii qarniga ee lagu khiyaamaynayey qadiyadda filasdiin ay wax ka ogeed qorshaha Trump.
Wargeyska New York Times ayaa faafiyay warbixin banaanka soo dhigaysa kaalinta Masar ee go’aankii Trump, wargeyska ayaa sheegay in codad uu ka duubay saraakiil katirsan sirdoonka Masar kuwaas oo xaqiijinaya in ay taabacsanyihiin qaraarka Dowladda Mareykanka ee Qudus siinayay Yahuudda.
Ugu horrayn codka kasoo xaluushay dowladda masar wuxuu sheegayaa in madaxweyne Cabdi fataax Alsiisi hoggaamiyaha Masar uu ogolyahay in Qudus lasiiyo waxa loogu yeero Israa’iil halka magaalada Rammalla laga dhigo caasimad ay filasdiiniyiintu yeelanayaan sidaasna lagusoo gaba gabeeyo dagaalka ka socda dhulka filasdiin wax ka badan 65 sanadood.
Wargeyska ayaa soo xiganaya Jeneraal ashraf alkhuuli oo katirsan mukhaabaraatka Masar kaas oo wariyaasha rasmiga ah ee warbaahinta Xukuumadda ku amraya in qadiyaddan ay ka gadaan shacabka ayna muujiyaan in Masar ay cambaareynayso go’aankii Trump balse ay xalka u aragto in caasimadda Filasdiin laga dhigo Rammalla islamarkaana Yahuudda lasiiyo Qudus.
Codka soo xaluushay ee New York Times heshay waxaa laga dhax maqlayaa laba sarkaal oo sirdoonka dowladda Masar katirsan oo afar saxafi oo caan ah siinaya awaamir ah in ay dadka uqurxiyaan xummaanta heshiiska qarniga loogu magac daray.
Jeneraal khuuli wariyaasha uu amarka siinayo ayaa kala ah Cazmi mujaahid,mufiid fowzi,Saciid Xasaasiin iyo gabar lagu magacaabo Yusra oo kamid ah kuwa caanka ka ah warfaafinta masar islamarkaana ah Fanaanad, mid kamida wariyaasha ayaa oranaya “annagu amarkaaga ayaan qaadanay” markaas ayuu jeneraalka katirsan sirdoonka ugu jawaabayaa “waxaan lajirnaa dhammaan saxiibadeena carabta waa in aan shakiga burburinaa oo aan arrinta ka dhignaa mid caadi ah suurtagal ma ahan in xiligaan filasdiiniyiintu wax iska caabin ku dhaqaaqaan mana dooneyno in aan dagaal aadno oo wixii hore ayaa wax walba noogu filan” oo uu ula jeedo dagaalladii Yahuudda lalasoo galay.
Jeneraal kale oo katirsan sirdoonka Masar ayaa isna codkiisa lamaqlayaa kaasi oo oranaya “halkii ugu dambeysay ayaan ka taaganahay arrinta intifaadada filasdiin sababtoo ah kacdoonno kale wax masaalix ah ma xaqiijinayo wuxuuna halis ku yahay amniga qaranka Masar oo wuxuu soo nooleynayaa firfircoonida islaamiyiinta sida xarakada xamaas oo xamaas waxay noqon sida mid hadda ladhalay”.
Mid kamida saxafiyiinta amarka lasiiyay ayaa xaqiijiyay jiritaanka arrinta laakin Jeneraal ashraf alkhuuli ayaa marna qiray marna meermeeriyay balse New York Times waxay sheegaysaa in codadka ay heyso oo ay ku kalsoontahay.
Arrintan fadeexadda ah waxay banaanka soo dhigaysaa xumaanta dawaaqiidda carabta oo marwalba dhagraya shucuubnta ay gumeystaan, Markii madaxweynaha Mareykanka uu qaatay go’aankii ka dhanka ahaa Qudus 5 December 2007 ayay dowladaha Carabta soo saareen bayaanno ay ku dalbanayaan in arrintan dib uhabeyn lagu sameeyo balse diidmo cad kama muujinayn.
Telefeshinka Almukallimiin ayaa baahiyay codadkan laga helaydhanka dowladda Masar waxaana durbadiiba soo baxday Jawaab celinno kala duwan oo laga bixiyay.
Halkan ka degso Video ku saabsan Caddeymaha ama Hoos Ka Daawo